Fivavahana avy Amin’Andriamanitra | Fanontaniana Ara-baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mizo Mooré Myama Ndebele Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Venda Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Avy amin’Andriamanitra ve ny fivavahana rehetra?
Voamarikao angamba rehefa mihaino vaovao ianao fa ampiasain’ny olona hanaovana zava-dratsy ny fivavahana indraindray. Tsy ny fivavahana rehetra mantsy no avy amin’ilay tena Andriamanitra. (Matio 7:15) Hita hoe voafitaka ny ankamaroan’ny olona.—Vakio ny 1 Jaona 5:19.
Hitan’Andriamanitra foana anefa ireo olona tso-po tia fahamarinana sy te hanao ny tsara. (Jaona 4:23) Manasa an’ireny olona ireny izy mba hianatra ny fahamarinana ao amin’ny Teniny, dia ny Baiboly.—Vakio ny 1 Timoty 2:3-5.
Ahoana no hamantaranao ny fivavahana marina?
Mampiray saina ny olona avy amin’ny fivavahana samihafa i Jehovah Andriamanitra. Ampianariny ny fahamarinana izy ireo sady ampianariny hifankatia. (Mika 4:2, 3) Ny fifankatiavan’ny olona ao aminy àry no amantarana ny fivavahana marina.—Vakio ny Jaona 13:35.
Mampiray saina ny karazan’olona rehetra i Jehovah Andriamanitra amin’ny alalan’ny fivavahana marina.—Salamo 133:1
Avy ao amin’ny Baiboly ny zavatra inoan’izy ireo ary ampihariny izay nianarany. (2 Timoty 3:16) Manome voninahitra ny anaran’Andriamanitra koa izy ireo. (Salamo 83:18) Toriny hoe ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no fanantenana ho an’ny olombelona. (Daniela 2:44) Manahaka an’i Jesosy izy ireo ka ‘mampamirapiratra ny fahazavany’, izany hoe manao soa amin’ny hafa. (Matio 5:16) Mankany an-tranon’olona izy ireo mba hiresaka momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Izay manao an’izany àry no manaraka ny fivavahana marina.—Vakio ny Matio 24:14; Asan’ny Apostoly 5:42; 20:20.
Finoana & Fivavahana